नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पहिलो कारोबारमै शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट –
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पहिलो कारोबारमै शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पहिलो कारोबारमै शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट: नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पहिलो दिनको कारोबारमै शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । कम्पनीले लकडाउन बीचमा शेयर सूचीकरण गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ( नेप्से) ले उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य पहिलो कारोबारको लागि रू. ४२४ तोकेको थियो ।
उक्त कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९१ प्रतिशत घटेको हो । कारोबार भएको ४० मिनेटमा कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ४२ ले घटेर रू. ३८२ मा कारोबार भइरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म कम्पनीको ४ हजार ९०५ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कोरोनाबाट विश्वभरमा मृत्यु हुनेको संख्या ५ लाख ४ हजार नाघ्यो १ करोड २ लाख संक्रमित: कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या ५ लाख ४ हजार ४९१ पुगेको छ । साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर १ करोड २ लाख ४९ हजार ८४० जना संक्रमित भएका विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । डब्लुएचओकाअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र २६ लाख ३७ हजार ७७ जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन् । यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा १ लाख २८ हजार ४३७ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ । युरोपमा २४ लाख १३ हजार ५१९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने १ लाख ९० हजार ७२५ को मृत्यु भएको छ । एशियामा २२ लाख १६ हजार ३२१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने, ५४ हजार ८५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अफ्रिकामा ३ लाख ८५ हजार २१९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने ९ हजार ६९८ जनाको मृत्यु भएको छ । ओसियानामा ९ हजार ४०७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने १२६ जनाको मृत्यु भएको छ । दक्षिण अमेरिकामा २१ लाख ४७ हजार ६८३ जना कोरोना भाइरस संक्रमति रहेका छन् । यहाँ ८२ हजार ३८६ जनाको मृत्यु भएको छ । उत्तर अमेरिकामा ३० लाख ७६ हजार ९७० जना कोरोना भाइरस संक्रमति रहेका छन् । यहाँ १ लाख ६६ हजार ६९० जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपाली समयानुसार सोमवार मध्याह्नसम्म प्राप्त समाचारअनुसार कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका ५५ लाख ५७ हजार ९८० जना निको भएका छन्न् । हाल विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमित करीब ४१ लाख ८७ हजार ३६९ व्यक्ति उपचाररत रहेका छन् । संक्रमितहरुमा ५७ हजार ३४७ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिइएको छ ।
← ९८ दिनपछि खुलेको शेयर बजारमा ४० मिनेटमै सर्किट २० मिनेटको लागि स्थगित
सिभिल लघुवित्तको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन →
नेपालमा एक जना थपिएसँगै कोरोना संक्रमित संख्या ३२ पुग्यो
नेपालमा थप २९३ जनामा कोरोना संक्रमित संख्या १५ हजार ७८४ पुग्यो
July 5, 2020 July 5, 2020 Namastekhabar 0